Saddex jir shalay la waayey oo saaka meydkiisa laga helay degmada Hiliwaa * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Wiil 3 sano jir ah oo shalay la waayey ayaa saaka meydkiisa laga helay xaafadda Ceeli-silig ee degmada Hililwaa ee magaalada Muqdisho.
Qof tegay goobta lasoo dhigay meydka cunugaan yar ayaa KNN u sheegay inaan la ogeyn cidda cunugaan shalay qaadatay, islamarkaana dishay.
Wuxuu sheegay qofka goobjoogaha ah in wiilku uu dhaawacyo ka qabo madaxa iyo killida, aynsa suuragl tahay in killida lagala baxay.
Goobjoogahan ayaa sheegay inuu arkay hooyada dhashay wiilkaan yar oo ku barooraneysa goobta lasoo dhigay meydka cunigeeda.
Degmada Hiliwaa ayaa ka mid ah degmooyinka ay ka dhacaan falal dambiyeedyada calculus, sida dilka dumarka iyo falal kale oo afduub ka mid yahay.
Ciidmada Soomaaliya iyo Amisom oo gudaha u galay degmada Maxaas ee Hiiraan